Macallinka Kooxda Dekedda ee Yuu Cali oo ka hadlay guushii ay ka gareen Rajo FC & Rajadooda hanashada horyaalka – Gool FM
(Muqdisho) 16 Jan 2020. Naadiga Dekedda ayaa guul muhiim ka gaartay naadiga Rajo FC kaddib markii ay 2-0 ugu adkaatay, ciyaar qeyb ka ahayd horyaalka Somali Premier League.
Dekedda guushan ay ka gaareen dhiggooda Rajo waxay uga dhigan tahay inay hoggaanka horyaalka sii dheereysatay, iyadoo iminka leh 7-dhibcood oo nadiif ah.
Kooxda Dekedda ayaa sanadkii la soo dhaafay ku guuleysatay horyaalka Somali Premier League, iyadoo saddex jeer oo xiriir ah ku guuleysatay koobkan.
Haddaba guushii ay gaareen kooxda Dekedda waxaa ka hadlay hoggaamiye Yuu Cali isagoo yiri: “Allaah ayaa ku mahadsan oo guul na siiyay, waa mid na farxad galinaysa guushan, sidoo kale nagu dhiiri-galinaysa inaan markii afaraad ku guuleysanno horyaalka.”
“Hadda waxaan hoggaanka horyaalka ku haynaa todobo dhibcood, waxaan rajaynaynaa inaan iska ilaalinno khasaaro naga soo gaarta kooxaha kale.”
“Waan ogahay in loollanka horyaalka uu aad u adag yahay, balse waxaa kaashan doonaa qibradda aan u leeyahay ku guuleysiga horyaalka, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ciyaartooyda, maamulka & taageerayaasha kuwaas oo mar walba nala garab taagan hiil iyo hoo, mahadsanadiin.”
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Dekedda ayaa kulanka soo aaddan waxa ay la dheeli doonta kooxda Jazeera Sports Club, ciyaartaas oo dhici doonta 22-ka bisha oo ku beegan maalin Arbacada ah ee todobaadka soo socda.
Koox ka dheesha horyaalka Premier League oo doonaysa inay la soo wareegto laacib ka tirsan Chelsea